Kirin 985 ga - abụ onye nhazi izizi ga - enwe 5G na amaala | Gam akporosis
Huawei's Kirin 985 ga-abata na 5G na nwa afọ
Huawei na-arụ ọrụ ugbu a n'ọgbọ ya ọzọ nke ndị na-arụ ọrụ maka njedebe dị elu. N'okwu a, anyị nwere ike ịtụ anya Kirin 985 ka ọ bụrụ ihe nhazi nke akara ndị China ga-ebupụta. Ihe izizi banyere nhazi a abiaworị, yabụ na anyị maara ntakịrị ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya. 5G kwere nkwa ịbụ akụkụ dị mkpa nke ya.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-emepụta akara akara nke China enweghị nkwekọrịta 5G. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume, ekele maka ojiji nke 5G modem na akara ndị China gosipụtara. Mana ọ dị ka Kirin 985 a agaghị achọ modem a.
Ebe ọ bụ na ozi ọhụrụ na-egosi na Kirin 985 a ga-abụ Onye nhazi izizi na ahịa iji tinye 5G. Yabụ na ọ gaghị adị mkpa iji modem, dị ka ọ dị n'oge a ma anyị ahụlarịrị n'ụfọdụ ekwentị nke akara ndị China, dị ka Nwunye 20 X. N'ihi ya, ọ bụ nnukwu mgbanwe.
A na-atụ anya na nhazi a ga-amalite na ọkara nke abụọ nke afọ a. N'ezie, Huawei Mate 30 ga-enwe mgbawa ọhụrụ a. N'okwu a, akara ga-alaghachi na nzọ na usoro ịmepụta na 7 nanometers na nhazi.
Kirin 985 a ga - abụ ọkwa nke Huawei kacha elu. N'afọ gara aga, ha enweelarị ike ịbụ ndị mbụ hapụụrụ anyị mgbawa arụpụtara na 7 nanometers. O yiri ka n’afọ a ha ga-abụ ndị mbụ nwere nhazi nke ga - enwe 5G nwaafọ. Oge dị mkpa.
Ọnwa ndị a anyị nwere ike na-atụ anya ọtụtụ asịrị na akụkọ banyere Kirin 985, anyị pụrụ ijide n'aka na nke a. Ya mere, anyị ga-ege ntị na data nke ga-abata banyere ihe nhazi ọhụrụ nke akara ndị China. Ebe ọ bụ na ọ na-ekwe nkwa ịbụ ihe dị mkpa na gam akporo ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei's Kirin 985 ga-abata na 5G na nwa afọ
Sony Xperia Ace: Laghachi na ekwentị 5-anụ ọhịa
Otu esi eji FTP iziga faịlụ na kọmputa gị